Tuesday September 16, 2014 - 06:03:23 in Ardayda Mustaqbalka by Super Admin
Maadaama ay dowr muhiim ah ka qaadanayso kor u qaadida dareen ka dhaqan, aqooneed iyo cilmi baaris ee ardayga, waxayna siinaysaa suurtagalnimada uu ku aqrisan karo masaadir iyo maraajic kala duwan, waxayna u suurta gelinaysaa koobida iyo xoojinta macluumaadka saxiixa iyo dhabta ah. Maktabadu waxay ka mid tahay aaladaha ugu muhiimsan ee ay suuragal tahay in ay loo kaalmaysto faafinta aqoonta iyo dhaqanka xubnaha bulshada dhexdooda ah.
Masaadirta cilmiga ah iyo kutubta taalo jaamacada islaamiga waxay isu gu jiraan sida soo socoto:-
·Kutubta tafaasiirta iyo culuumta qur,aanka.
·Kutubta axaadiista iyo culuumtiisa.
·Kutubta fiqhiga islaamka, usuushiisa iyo qawaacidiisa.
·Kutubta luqada carabiga iyo adabkeeda.
·Kutubta fikirka iyo caqiidada islaamka.
·Kutubta siyarka, taariikhyada iyo taraajimta.
·Kutubta tarbiyada, cilmi nafsiga iyo cilmiga bulshada.
·Kutubta juquraafiya, cilmiga kharaa’idka iyo cilmiga cirbixinta.
·Kutubta culuumta iyo xisaabaadka.
·Kutubta maamulka, dhaqaalaha, cilmiga siyaasada iyo xisaabinta.
·Kutub cilmi ah oo kala duwan.
·Canjalado kala duwan.
·Majalaad iyo dowriyaad kala duwan.